जापानमा आफ्नो दैनिकी एडजस्ट गर्दै - यी कुरा मलाई पहिलेनै थाहा भएको भए | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापानमा आफ्नो दैनिकी एडजस्ट गर्दै – यी कुरा मलाई पहिलेनै थाहा भएको भए
जापान केहि महिनाको लागि बस्न होस् वा केहि दिनको लागि घुम्न होस्, सुन्दै रोचक छ। नया देशको नया संस्कृति, नया इतिहास, टेक्नोलोजी, इनोभेसन, हेर्ने र घुम्ने ठाउ अनेकौ हुन्छन। तर आफु बर्षौ देखि बसिरहेको घर बाट टाढा जापानमा पक्कै पनि जिबन शैली एडजस्ट गर्न समय लाग्दछ। म सजिलै घुलमिल हुन सक्ने भएर होला, मलाई यहाँ जिम र ग्रोसरी स्टोर खोज्न बाहेक अरु कुरामा तेती समस्या परेन। तर नया ठाउले धेरैलाई अनेक थरिको समस्या र अप्ठेरो परिस्थितिहरु सिर्जना गर्दछ।
सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको नया ठाउ वा नया देशमा जादा खुल्ला सोच र बिचार राख्नु पर्दछ। त्यो माथि सस्कृतिनै फरक भएको देश जादा आफ्नो देश संग परम्परा वा चाल चलन मिलेन भनेर दुख मानेर बस्ने कुरा आउदैन। त्यसैले जानु अघि त्यो देशको सामान्य सस्कृति, परम्परा र बिचारको थोरै भएपनि जानकारी लिनु पर्दछ। त्यसै गरि यदि हजुर इन्टर्नसिपको लागि आउदै हुनु हुन्छ भने वर्क कल्चर र ईथिक्सको पनि जानकारी लिनुहोस्। जापानको कुरा गर्ने हो भने यहाँ मानिसहरु भेट्दा त्यति हात मिलाउदैन। त्यसै गरि एस्कालेटरमा उभिने मानिस हरु देब्रे तिर उभिन्छन र दाया तिर खुल्ला हुन्छ। यो हतारमा हिड्ने मानिसकोको लागि हो। रस आवरको बेला ट्रेनमा हल्ला गर्दैनन्। यस्ता स-साना नियम थुप्रै छन् र यी कुरा थाह हुदा जिबन शैली निकै सहज हुन जान्छ।
तर एउटा कुरा हजुरले जति नै विस्कृत रुपमा योजना बनाएपनि यहाँ आईसकेपछिको परिस्थिति निकै फरक हुन सक्दछ।हजुरले युट्युबमा हेरेको भिडियो, अनेकौ वेबसाईटमा पढेको लेख भन्दा फरक जापान पाउन सक्नु हुनेछ। यी कुराहरु ब्यक्तिको आफ्नो पर्सनल अनुभबमा बनेको हुने हुनाले हजुरलाई फिट नहुन सक्दछ। आज म पनि हजुरलाई केहि कुराहरु सुनाउने छु जुन मलाई जापान आउनु भन्दा अगाडि थाह भएको भए मलाई जापानको बसाई थप सहज हुने थियो।
१. लगेज सके सम्म लाईट प्याक गर्ने
मलाई यो टिप् त धेरैले भनेका थिए तर मैले यसको ठिक उल्टो गरे। मलाई फेसन मनपर्ने हुनाले अनेकौ आउटफिट ट्राइगर्न मनपर्छ। त्यसकारण मैले धेरै लुगाफाटा प्याक गरे। मैले ६ जोर जुत्ता हालेको थिए। अनि ६ जोर जिन्स। अहिले सम्जिदा तेत्रो लुगा र जुत्ता नाचिने रहेछ। काममा व्यस्त हुने हुदा म त्यति बाहिर घुम्न जाने फुर्सद नि पाउदिन। आउदा मेरो लगेज ठिक साईजको भएता पनि फर्किने बेला सबलाई कोशेली लानु पर्ने हुनाले मैले भरि सुटकेसको दुख पाउनेछु।
२. आफुले नखाने (खान नमिल्ने चिज) जापानीमा भन्न सिक्नु
म पेस्कटारियन भएकोले मलाई जापानमा खानको तेती चिन्ता त छैन। समुद्रले घेरिएको देश जापानमा सी फुड जता ततै पाईन्छ। तर पनि यी खानामा अन्य मासु वा मासुबाट बनेका स्टक प्रयोग गरिएको हुने हुदा म साबधानी अपनाउछु। यदि हजुर भेजिटेरियन हो भने आफुले मासु वा मासुको ब्रोथमा पाकेको परिकार नखाने कुरा भन्न सिक्नु होस्। त्यो माथि यदि हजुरलाई कुनै खानेकुराले एलर्जी छ भने वेटरलाई वा कन्सर्न मान्छेलाई शुचित गर्नु होस्।
३. सामान्य जापानी भाषा सिक्नुहोस
यहाँ मैले सामान्य भन्नाले धन्यबाद, हेल्लो, बाई बाई र एक्सक्युज मि जस्ता शब्द मात्र भन्न खोजेको हैन। मैले यी शब्दहरु त केहि दिनमै सिके। तर मैले अझै दिनानुदिन प्रयोग गरिने जापानी भाषामा समय दिनु पर्ने थियो। जापानी बिजिनेस एटिकुइटिको भाषा निकै फरक हुने गर्दछ। त्यसैगरी खान खानु अगि र खाई सके पछि जापानीहरु केहि भन्ने गर्छन। यो उनीहरुको खाना प्रतिको ग्र्याटिट्युड देखाउने तरिका हो। यी कुराहरुले हजुरलाई यहाँको समाजमा चाडो घुलमिल हुन सिकाउछ।
४. जापानमा पाइने फुड थाह पाउनु होस्
हजुर जापान आउदै हुनुहुन्छ भने यो माइण्ड सेट बनाउनुहोस् कि जापानमा हजुरको घरमा जस्तो ग्रसरी नपाउनु सक्छ। हजुरको घर तिरको स्टेपल फुड यहाँ स्टेपल नहुन सक्छ। फल फूल र नट्सहरु धेई महँगो हुन्छन। हरियो साग सब्जी पनि यहाँ महँगो छ। मैले खाने एल्मोण्ड मिल्क पनि कुनै कुनै सुपर मार्केटमा मात्र पाईन्छ। यो नराम्रो कुरा हैन। किन कि हजुरले नया नया खान चाख्न पाउनु हुन्छ। तर यदि हजुरलाई केहि स्पेसिफिक चाइएको छ भने स्टाफलाई सोध्न नबिर्सिनु होस्। उनीहरुले हजुरलाइ सके सम्म सहयोग गर्ने छन्। मलाई ओट मिल चाहिएको थियो तर भेटिरहेको थिन। त्यसैले मैले गुगल ट्रांस्लेटमा खोजेर स्टाफलाई सोधे। उसले मलाई सजिलै राखेको ठाउ देखायो। म खुसि खुसि आफ्नो ओट मिल लिएर निस्के।
५. मौसम अनुसार प्याक गर्नु होस्
मैले मेरो इन्टर्नसिपको लागि प्याक गर्दा मौसमको राम्रो संग बिचार गरिन। मैले सोचेकी जापान र स्टेट्सको मौसम उस्तै उस्तै होला। हुन पनि उता समर हुदा यहाँ पनि समर नै हुदो रहेछ। मैले समरको ड्रेसहालेर गल्ति गरेको छैन। तर मलाई यो थाह थिएन कि जापानमा समर र मनसुन उस्तै उस्तै बेला हुन्छन भन्ने। मैले ज्याकेट र रेन प्रुफ जुत्ता हाल्न जरुरि ठानिन। अहिले आएर पानि पर्दा यहाँ हल्का चिसो हुन्छ। अनि त्यो माथि जुत्ता भिज्नेहुनाले चिसो मोजाले खुटा चिसो भै रहन्छ।
६. धेरै क्याश बोक्नु होस्
जापान अहिले पनि क्याश बेस्ड समाज हो। मैले आफुलाई पुग्ने क्याश लिएर आएको छु भन्ने सोचेको थिए। अनि पुगेन भने कार्ड प्रयोग गर्छु भन्ने सोचेको थिए। तर त्यो पैसा त कति खेर सिद्दियो पत्तो पनि पाईन। यहाँ धेरै रेस्टुरान्तमा कार्ड चल्दैन। धेरै जसो मानिसहरु कारोबार क्याशमा गर्दा रहेछन। यदि हजुर इन्टरनेसनल कार्ड प्रयोग गरेबापातको चर्को शुल्क तिर्न चाहनु हुन्न भने धेरै क्याश बोकेर आउनु होस्।
७. सके सम्म बाहिर निस्किनु होस्
मलाई सुरु सुरुमा म संग दुई महिना समय छ जुन मलाई जापान घुम्न पर्याप्त हुन्छ जस्तो लागेको थियो। तर म गलत रहेछु , समय त चाढो बित्नेछ। झन् म त हप्ता भरि काम गर्ने हुनाले घुम्न जाने मौका भनेको विकेन्डमा मात्र हुन्छ। त्यसैले म अहिले सके सम्म बाहिर निस्किने कोशिस गर्दछु। हामी साथिहरु विकएण्डको प्लान अगाढीनै बनाएर राख्दछौ, यसो गर्नाले पछि के गर्ने भन्ने हुदैन। नया देशमा आउदा पक्कै पनि अनेकौ समस्या आउछ। हजुरलाई कतै निस्किन मननलाग्न सक्दछ। तर पनि रिग्रेट नगर्नुहोस्। जापान निकै रमाइलो छ।
जापानको पानी पर्ने सिजनमा भिज्नबाट बच्ने केहि उपाय
ओसाकाको मोह – ५ घुम्ने पर्ने ठाउँ
जापान पहिलो चोटी आउदाको ल्यांगेज ब्यारिअर
By Montse Longoria
ओदाईबामा रहेको प्यालेट टाउन मलमा घुम्न सकिने ५ ठाउँ
हेक्सा राईड : एउटा अविश्वसनीय भर्चुअल रियालिटीको अनुभब
यदि हजुर जापान लामो समयको लागि वा स्थाई रुपले आउदै हुनुहुन्छ भने हजुरको खान्कीमा पक्कै पनि केहि फेरबदल आउने छ। जापानी खाना भन्ने बितिकै भात, सुशी, रामेन, नुडल, मिसो सुप, तेम्पुराहरु हुन्। यी खानाहरु मलाई निकै मनपर्दछ। हजुरलाई पनि यी खाना मनपर्ने आस गर्दछु। तर यदि हजुर यहाँ धेरै लामो बसाईको लागि आउदै हुनु हुन्छ…
कल्पना गर्नुहोस्, हजुर जापानको गर्मि को मजा लिइ रहनु भएको छ। तेतिकैमा हजुरले बादल बढेको देख्नु हुन्छ। आकाश कालो निलो हुदै आउन लाग्दछ। हावाको बेग पनि बढ्दै छ। अनि सुरु हुन्छ आकाश बाट पानी पर्न। जापानको पानी पर्ने मौसमलाई कदापि हलुका संग नलिनु होस्। १५ cm प्रति महिना सरदरको पानी पर्ने यहाँ जुनसुकै घाम लागेको…
ओसाका एक बिसेष सहर हो। यो टोक्यो भन्दा अलि भिन्न छ। सोझो रुपमा भन्दा टोक्यो आएको १ महिना पछि म ओसाका घुम्न गए। मलाई ओसाका भने टोक्यो भन्दा अलि तितरबीतर बहेको र केहि कुराहरु नमिलेको जस्तो लाग्यो। जुन एक्सप्लोर गर्न आफैमा रमाइलो कुरा हो। मलाई ओसाका अलि हेक्टिक र लाउड लाग्यो। यहाँ मानिसहरु एस्कलेटरमा दाया…
म जापान २ महिनाको लागि इन्टर्नसिप गर्न आउने कुरा तय भयो, तब मलाई घरमा भेट्ने सबैले एउटा प्रश्न गरि रहन्थे, के तिमीलाई जापानी भाषा बोल्न आउछ ? “नाई, मलाई अलिकति पनि जापानिज आउदैन”, मेरो जबाफ सबैलाई एउटै हुन् थियो। तर मा ल्यान्गेज ब्यारिअरको एउटा मात्र समस्याले आफुले जापान जान पाएको मौका गुमाउन चाहान्न थिए। जापान…
के हजुरलाई यी पाच युट्युबरको नाम थाहा छ ?